Dr. Patrick Young, Qoraa aasaasay
Dr. Patrick Young ku qoray Pregabalin .
1.Waa maxay Pregabalin? Pregabalin (148553-50-8) waa dawo inta badan lagu iibiyo magaca summadaha Liyuuga ee gobollada kala duwan ee adduunka. Waa daawo ka hortaga suuxdinta oo sidoo kale loo yaqaan 'anticonvulsant'. Daawada waxaa loo isticmaalaa in lagu yareeyo waxyaabaha maskaxda ku dhaca ee sababa suuxdinta. Dhanka kale, Pregabalin waxay saameyneysaa maskaxda […]
Marka loo eego xogta laga soo xigtay Dib-u-eegista Dadweynaha Adduunka, Mareykanka wuxuu kaalinta 12aad ka galay adduunka ee cayilnaanta dadka ku nool. Xarunta xakamaynta Cudurrada (CDC) waxay ku qiyaastay in 36.9% dadka Mareykanka ah ee ka weyn da'da 20-sano ay yihiin kuwo isku buuran, oo ku saleysan macluumaadka laga soo aruuriyay 2016. Tirakoobka rasmiga ah wuxuu muujinayaa in 41.1% dumarka, iyo […]